Fanafihana teny Anosibe : olona dimy indray nidoboka am-ponja, vehivavy ny iray | NewsMada
Fanafihana teny Anosibe : olona dimy indray nidoboka am-ponja, vehivavy ny iray
Naiditra am-ponja avy hatrany rehefa avy natolotra ny fampoavana ireo olona dimy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fanafihana teny Anosibe, ny 19 jona 2017 lasa teo. Karohin’ny polisy kosa ny jiolahy iray atidohan’ny fanafihana, antsoina hoe i Gena…
Nahazo loharanom-baovao ny polisin’ny Sag tamin’io fotoana io fa misy andian-jiolay mivory manomana fanafihana eny Anosibe. Jiolahy efa fanta-daza amin’ny halatra, vaky trano miharo herisetra tarihin’i Gena sy ny namany. Manana fitaovam-piadiana mahery vaika ry zalahy ary afenina ao anaty fahitr’omby, araka ny fanazavan’ny polisy. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisin’ny Sag sy ny BC, sakelika fahefatra nanao ny fisamborana ka voasambotra teo amoron-dalana tsy lavitra ny toerana voatondro ny jiolahy telo raha tafaporitsaka kosa ny namany. Nitohy hatrany ny fikarohana ka voasambotra tao an-tranon’ny fianakaviany ny iray tamin’ireo olon-dratsy izay fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Bolo.
Niroso tamin’ny fisavana ny trano ny polisy ka hita tao an-trano ny vehivavy roa sy vehivavy iray hafa tompon-trano. Hita tao anaty fahitr’omby ny pare brise-na fiara miisa fito. Nisy entana maromaro toy ny ordinatera, onduleur, convertisseur sy ny maro hafa koa tratra tany amin’izy ireo.
Nitohy teny Ambohimangakely, ny 20 jona 2017 maraina ny fisamborana sy ny fisavana ka tratra tamin’izany ny jiolahy iray antsoina hoe Fetra. Nisy iray hafa kosa nitolo-batana tao amin’ny kaomisaria eny 67 ha. Eo am-pikarohana an’i Gena na Rakotosamimanana Jaona izay atidoha nikotrika ny fanafihana. Nahatratra sivy, araka izany, ireo olona voasambotra tamin’ity raharaha ity. Taorian’ny fanadihadiana, nisy tamin’ireo voarohirohy no nalefa nody ka isan’izany ilay nitolo-batana teny amin’ny polisy noho izy tsy salama loatra, araka ny fanazavan’ny polisy.